सन्दर्भ: विश्व योग दिवस २१ जून -योगको परिचय, प्रकार र फाईदा
१६ जेठ २०७७, शुक्रवार | May 29, 2020 | 00:36:11
By synergyfm on	 June 20, 2017 प्रमुख समाचार, स्वास्थ सरोकार
संक्षेपमा योग भन्नु संयमतापूर्वक साधना गर्दै आत्मालाई परमात्माको साथ योग गरेर (जोडेर) समाधि आनन्द लिनु हो । आधुनिक योगको योगी श्री अरविन्दको अनुसार परमदेवको साथ एकत्व प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्नु तथा यसलाई प्राप्त गर्नु नै सवै योगहरूको स्वरूप हो । जैनाचार्येको अनुसार जुन साधनहरूले आत्माको सिद्धि र मोक्षको प्राप्ति हुन्छ त्यो योग हो । अन्यत्र जैन दर्शनमा मन वाणी एवम् शरिरको वृतिहरूलाई पनि कर्मयोग भनिएको छ ।
स्वामी रामदेव बाबा भन्छन –‘योग समाधी हो आफ्नो पहिचान आफै गर्ने हो । म को हुँ कहाँबाट आए आदि कुराहरूको खोजि योगले गर्छ । एक व्यक्ती जो डाक्टर, व्यापारी, उधोगी, राजनितिज्ञ, आदि भई ठुलो मान्छे हुन्छ अझ सबभन्दा बढी महामानव हुन योग गर्नुपर्दछ । योगनगरी भोगमा लागेमा उसको आत्मामा दैत्य, राक्षसको बास हुन्छ । त्यसैले आऔ योग गरौ निरोगी रहौ ।’ मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग र राजयोग गरी योग चार प्रकारका हुन्छन् ।
मन्त्रयोग मातृकारीयुक्त मन्त्रलाई १२ बर्षसम्म विधिपुर्वक जप्नाले अप्रिया आदि सिद्धिहरू साधकलाई प्राप्त हुन जान्छ । लययोग भनेको दैनिक क्रियाकलापहरू गर्दै सदैव ईश्वरको ध्यान गर्नु हो । हठयोग बिभिन्न मुद्राहरू, आसनहरू, प्राणायाम एवम् बन्धहरूको अभ्यासले शरिरलाई निर्मल एवम् मनलाई एकचित्त गर्नु हो । राजयोगले यस नियमाधिको अभ्यासले चित्तलाई निर्मल गरेर ज्योतिरमय आत्मालाई साक्षातकार गराउछ ।
योग तथा प्राणायाम गर्दा बिभीन्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । शान्त, स्वच्छ, सफा र राम्ररी हावा खेल्ने ठाउँ, जस्तै : खुला कोठा, वगैचा, आगन, दलान, छत आदि र खुला चउर वा नदीको किनार सर्वाधिक उत्तम मानिन्छ । उज्यालो हुनु एक घण्टा अगाडिको समयलाई ब्रह्ममुहूर्त वा अमृत बेला भन्निछ जुन वेला योग तथा प्राणायाम गर्नु उत्तम हुन्छ । सम्भव नभएमा बिहानको आठ वजे सम्मको समय अथवा खाली पेटमा वेलुका पनि योग तथा प्राणायामको अभ्यास गर्न सकिन्छ । प्राणायाम तथा योग अभ्यास सकभर खाना खाएको ५ घण्टा पछि वा ५ घण्टासम्म पेट खाली भएको वेला गर्नुपर्छ । अभ्यासको आधा घण्टा पछि पानी पिउन र एक घण्टा पछि खाना खान सकिन्छ ।
प्राणायामहरूबाट हुने फाईदाहरू :
प्राणायामहरू ८ किसिमका हुन्छन् । प्राणायाम सुरु गर्दा तिन किसिमबाट गर्न सकिन्छ ।
१. मन्दगती : बिस्तारै बिस्तारै गर्ने । २. मध्यम गति : सामान्य रूपमा अर्थात स्वभाविक रूपमा गर्ने । ३. तिव्र गति : छिटो छिटो गर्ने । जस्को कलेजो (फेफडे) र हृदय (मुटु) कमजोर छ त्यस्तो व्यक्तीले मन्द गतिबाट गर्नु पर्दछ । स्वस्थ व्यक्ती र पुराना अभ्यास गरिरहेका व्यक्तीले विस्तारै विस्तारै गर्दै श्वास प्रश्वासको गति बढाउदै मध्य र तिव्र गतिले सास लिने र छाड्ने गर्नु पर्छ । श्वास लिदा पेट फुलाउनु हुदैन । छाती, फोक्सोमा सास भर्ने र छाडने गर्नु पर्छ ।
व्यायाम तथा आसनहरूबाट हुने फाईदाहरू
३१. शान्ति पाठ गर्दै व्यायम तथा आसनहरू समापन हुन्छन् । प्राणायाम योग तथा व्यायामहरू गर्ने तरिका पतन्जली योग समितिबाट समय समयमा हुने शिविरमा योग शिक्षकबाट प्रत्येक्षरूपमा सिकेपछि उपरोक्त फाईदा लिई शरिर स्वस्थ तथा निरोगी हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन ।